Raxanreeb.net | Archive | Wararka Maanta
Waxaa lagu wadaa in tobabaraha kooxda Arsenal uu ka tago kooxda dhamaadka xilli ciyareedka,waxa uu maamulaha kooxdan ahaa ku dhawaad 22 sano. Ninkan oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa ka tagaya kooxdiisa sanad un ka hor inta uu qandaraaskiisa dhicin . Kooxda Arsenal ayaa kaalinta lixaad kaga jirta horyaalka Ingiriiska ,iyadoo laga yaaba inay u […]
Ciyaartoyda Xulka Qaranka Kubada Cagta Dalkeena Soomaaliya ee da’doodu ka hooseysa 17-jirada ayaa waxay guul muhiim ah ay ka gareen xulka qaranka kubada cagta Kenya tartanka Cecafa ee 17-jirada kadib markii 1-0 ay ugaga badiyeen. Xulka Soomaaliya ayaa waxaa goolka guusha u dhaliyay ciyaaryahanka lambarka 11aad Farxaan Duqoow waxayna guushan ay tahay mid aad muhiim […]
Ciidamo la sheegay in ay ka tirsan hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda Qaranka, ayaa galay gellinkii dambe ee shalay guriga xildhibaan C/llaahi Cali Axmed oo loo yaqaan [Caddow Cali-gees] oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in xilliga guriga xildhibaanka la galayay uusan dalka ku sugnayn, isla markaana uu safar u jiray dalka Mareykanka, […]
Mudaharaadyo xoog weyn oo ay isugu soo baxeen dadweyne aad tiro badan ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhaceen deegaamadda Gar-adag iyo Ceel Af-weyn ee Soomaaliland. Dadka isugu soo baxay banaanbaxan ayaa badankood waxay ka soo jeedaan beesha uu hogaamiye dhaqameedka u yahay Boqor Buur-Madow, waxayna taayiro ku gubeen dariiqyada magaalooyinkaas. Ciidamadda Booliska Somaliland ayaa […]
Raysal Wasaaraha dalka Itoobiya ee dhowaan la magacaabay Abiy axmed ayaa magacaabay Golaha Wasiiradda ee Xukuumadiisa la shaqeyn doona. Xukuumadda cusub ee dowladda Itoobiya ee uu magacaabay Raysal Wasaare Abiy ayaa waxay ka kooban tahay 16 Wasiir oo ka kooban qowmiyadaha waddanka Itoobiya, waxaana ka mid ah Wasiiro hore uga tirsanaa xukuumadii hore. Wasiirka Gaashaandhiga […]
Afhayeen u hadlay Xisbiga Kulmiye ee haya hogaanka maamulka Soomaaliland ayaa si adag wuxuu uga hadlay eedeyn uu shalay saxaafadda u soo gudbiyey Guddoomiyaha Xisbiga Waddani C/raxmaan Cirro. C/raxmaan Cirro ayaa wuxuu ku tilmaamay Madaxweynaha Somaliland inuu khiyaamay shacabka Somalialnd kadib markii la ogaaday waraysigii Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda dalka Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Gargaash. […]
Tima-jare Cabdiraxin Cumar oo 21 sano jir ah kuna nool magaalada Bedford ee dalka Ingiriiska ayaa maxkamad ku xukuntay siddeed bilood oo xarig ah kadib markii uu qirtey in si qalad ah uu uga jaray timaha wiil toban sano jir ah. Maxkamada Luton Crown ayaa dhagaysatay dacwada waxana uu timajaraha uu qirtey in si qalad […]
Isagoo boqolaal shacab ah kula hadlayey magaalada Boosaaso ayuu madaxweyne Gaas si adag uga hadlay arrimaha balaarinta dekedda Boosaaso, mucaaradka Xukuumadiisa, amaanka, Difaaca Puntland, Dawlada Federalka iyo arinta Imaaraadka Carabta. Isagoo tusaalaynaya dhibka ay ganacsatadu ku qabaan dekeda Boosaaso iyo maalgelinta ay ku samaynayaan ayuu sheegay in kuwii ay dantooda ahayd dacaayado ka fidinayaan iyo […]
Dowladda Imaaraadka Carabta oo xiriirka kala dhexeeya Dawladda Federaalka Somalia uu sii xumaanayay mudooyinkii u dambeeyay ayaa markii ugu horreeyey ka hadashay mowqifkeeda ku aaddan xiriirkaas, tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu joojiyay barnaamijyadii uu ka waday Somalia. Wasiir-u-dowlaha wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Imaaraadka, Anwar Maxamed Qarqaash ayaa sheegay inay aqoonsan yihiin midnimada guud […]
War ay shaaciyeen Guddiga Dabagalka Hantida Qaranka ee Baarlamaanka Soomaaliland ayay ku sheegeen inay baaritaan ku sameeyeen haamaha shidaalka ee magaaladda Berbera, waxayna sheegeen inay soo ogaadeen in Raysal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu ka mid yahay shirkaddaha saamileyda ee haamaha Berbera. Xildhibaan Naasir Xaaji Cali shire oo saxaafadda la hadlay ayaa carabka wuxuu […]